Abathengisi - Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Ikhwalithi, Ubuqotho, Ukuqamba, Ukuvuleleka
Ukuqasha Abasabalalisi Bemikhiqizo Yomhlaba
UMankeel ungumkhiqizi wokuqala emhlabeni ukuphakamisa nokusebenzisa iphrojekthi yokukhiqiza isikuta sikagesi okwabelwana ngaso. Ithatha cishe uhhafu wokuphakelwa komhlaba wonke kwama-scooters kagesi okwabelwana ngawo, Sesisungule uhlelo oluvuthiwe noluzinzile lokukhiqiza kanye nokuhlinzeka ngezikuta zikagesi, kanye nohlelo lokumaketha oluphelele noluchwepheshile, uhlelo lwesevisi yokuthengisa ngaphambi kokuthengisa kanye nangemva kokuthengisa.
Izinguquko ezidingweni zokuvakasha zabantu eminyakeni yamuva nje kanye nempendulo evela kumakhasimende avela emazweni angaphezu kuka-80 kusinikeze ukuzethemba okuphelele nesiqiniseko esihle sokuthi abantu bayayinaka kakhulu indawo esihlala kuyo futhi bafuna ithuluzi lezokuthutha elivumelana nemvelo. Ukuqubuka kwalolu bhubhane ngo-2019 kuphinde kwakhumbuza abantu ngesidingo sokuhamba ngekhabhoni ephansi. Ama-scooters kagesi alula futhi anobungani bemvelo sekuyizinketho ezithandwa kakhulu kubantu zokuhamba.
Samukela ngobuqotho abantu abazimisele ngokumela umkhiqizo ka-Mankeel ukuze bathuthuke emakethe echumayo yama-scooters kagesi, futhi ngokuhlanganyela sakhe i-win-win ndawonye!
Ubani ongaba umdayisi we-Mankeel electric scooters
1: Abantu abanqume ukuthuthukisa imakethe ebanzi yezikuta zikagesi noMankeel
2: Abantu asebevele benza izithuthuthu zikagesi noma izimboni ezihlobene, kodwa abafuna ukwandisa isabelo sakho semakethe yomkhiqizo
3: Abantu abanolwazi ekusebenziseni izikuta zikagesi kanye nemikhiqizo yamasondo ehlobene
4: Abantu abahlela ukuthuthukisa ibhizinisi le-scooter kagesi ngemali eyanele
Ukwesekwa kwethu kwabasebenzeli bomkhiqizo
Intengo nokuvikelwa kwemakethe
I-Mankeel inesethi yamazinga afanelekile nasobala okukhethwa nokubambisana kwabasabalalisi. Abasabalalisi abahlangabezana nezindinganiso zethu zokuhlola zangaphambili kuphela abangamela izinhlobo zemikhiqizo yethu. Uma ukubambisana kokusabalalisa umkhiqizo sekuqinisekisiwe, kungakhathaliseki ukuthi ngokwentengo yomkhiqizo noma ukunikezwa komkhiqizo, sizophatha ngokuqinile imigomo yokubambisana ukuze sivikele futhi sisekele amalungelo nezinzuzo zakho.
Isevisi yangemuva kokuthengisa kanye nesevisi yangemuva kokuthengisa, isiqinisekiso sokufika ngesikhathi kokulethwa kwezinto
Senze izindawo zokugcina izimpahla ezi-4 ezihlukene zaphesheya kanye nezindawo zokulungisa ngemuva kokuthengisa e-United States naseYurophu, ezingamboza ukuhanjiswa nokusabalalisa e-Europe nase-United States. Ngesikhathi esifanayo, singakunikeza nensizakalo yokudedela umkhumbi, sikulondolozele ukugcinwa kwezinto kanye nokuthengiswa kwangemva kokuthengisa Izindleko zesevisi.
Umfelandawonye wokumaketha ojwayelekile, ukwabelana ngezinsizakusebenza
Mayelana nokukhuthazwa komkhiqizo nomkhiqizo nokumaketha, sizokwabelana ngokungagodli ngezithombe zomkhiqizo, amavidiyo omkhiqizo, izinsiza zokumaketha, nezinhlelo zokuthuthukisa ukumaketha, futhi sizokwabelana ngezindleko zakho zokumaketha futhi sikwenzele ukuphromotha okukhokhelwayo. Yethula ikhasimende kuwe ukuthi lenze umkhiqizo kanye nokukhushulwa komkhiqizo ndawonye ukuze wandise ithonya lebhizinisi lakho kanye nokugeleza kwamakhasimende akho.
Izinzuzo zokuba umsabalalisi wethu
1: I-Mankeel ingakunikeza imikhiqizo engabizi kakhulu, yesithuthuthu sikagesi esebenza kakhulu kanye nezixazululo nezinqubo eziphelele, kusukela kumasampula ukuya kuma-oda ayinqwaba, kanye nekhwalithi ephezulu yokuthengisa kwangaphambili kanye nezinsizakalo zangemuva kokuthengisa. Ukuze wehlise izindleko zangemuva kokuthengisa zebhizinisi lakho lesithuthuthu sikagesi, siza ibhizinisi lenkampani yakho lesithuthuthu sikagesi ukuthi lithuthukise ukuncintisana kakhudlwana.
2: Sinekhono elizimele ledizayini kanye nocwaningo kanye nentuthuko elinganikeza ozakwethu izithuthuthu zikagesi ezenziwe ngokwezifiso ezikhiqizwe imithetho neziqondiso zamazwe ahlukahlukene noma izifunda ukuze ungadingi ukukhathazeka ngokuba semthethweni kokuthengiswa komkhiqizo.
3: Ukuthuthukiswa okuzinzile, uhlelo oluzimele noluphelele lwe-supply chain, ukusungulwa komkhiqizo womkhiqizo, nokusekelwa okufika ngesikhathi ekuthengiseni kwangaphambilini nezixhumanisi zangemuva kokuthengisa, singakwenzela konke.